Deparmantiin mana fayyaa Iowa akka gabaaseti sababa Covid-19 Woodbury County keessati namni haarawa | KWIT
Siouxland District Health akka jedhaniti talaali guyya Wiyxata Tyson kennamuuf akka banaa ta’an gabaasan. Hojattoota fi namoota qama miidhamtoota mana keessati gargaarsa argatanii beelamni qabame jira. Hojattooni gurguddoon akka jedhanitti talaali kunis kan dhumaa akka tau maluu himan. Haata’u malee, karaa Mary J. Treglia Community House clinic dhan kan walgahan nii tau. Gabaasni dabalataa kan irrati hojatamaa jiruudha.
Jiraattoni Woodbury County parsantii 20% ta’an talaali corona virus kan jalqabaa kan fudhatani yoo ta’u parsanti 4.5% ta’an ammo talaali lachuu kan fudhatanii dha.
Ogeessi akka jedhetti wagga kana balaan lolaa kan Missouri River baaye kan xiqqaatu akka ta’u himan. Sababni isaa haala qilleensa gogaa kan ta’ee fi snowpack muraasa kara north kan argateedha.
U.S. Army Corps kan Engineers hanga bishaani Gavins Point Dam kan Yankton bira kan South Dakota jira akka dabalee himani jiran. Garuu layni ammas haala xiqqaa keesa akka deemu jiru himan.